| အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုယူပါ နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုသင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်နှစ်အဘို့သင့်အဆင်သင့်ဆုံးဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ပင် Practitioner option ကိုများအတွက်စမ်းသပ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါIAC®အားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အတိုင်းဤစမ်းသပ်မှုနည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာသင်တို့၏နားလည်မှုကိုတိုင်းတာလိမ့်မယ်။
တစ်မူထူးခြားသော ID နံပါတ်နှင့်အတူမဆိုမှတ်ပုံတင်IAC®အဖွဲ့ဝင်အဆင့် 1, အွန်လိုင်းမှစမ်းသပ်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့တဆင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အဆင့် 1 ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန် အဖွဲ့ဝင် Dashboard ကို.
သို့မဟုတ် "အမတ်ပက်ကေ့": သင်ဟာတစ်ခုခုကိုမှာ "အွန်လိုင်းစမ်းသပ်အဆင့် 1" ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပါလီမန်အမတ်များပက်ကေ့အကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်ရန်, "သော်လည်းဖတ်ပါMastery Practitioner အထုပ်"အကြိုးခံစားခှငျ့
အဆိုပါပိတ်ပင်အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုယူအတွက် log နှင့်သွားပါ အဖွဲ့ဝင် Dashboard ကို.
"လက်မှတ်ပဲရှိသေး on" button ကိုချတစ်စက်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အွန်လိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း: 1 Step လင့်ခ်
မရှိအချိန်ကန့်သတ်မှုနှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးစီးရန်လူတစ်ဦးစီယူအချိန်ကိုကျယ်ပြန့်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာကျနော်တို့ကသင်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ 4-5 နာရီဘေးဖယ်ထားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သငျသညျနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအစည်းအဝေးများအတွက်ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုပေမည်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ™နှင့်ကျင့်ဝတ်များပိတ်ပင် Code ကို၏ဗဟုသုတနှင့်သရုပ်ပြအပေါ်အခြေခံသည်။
စုစုပေါင်း 100 မေးခွန်းများကို
တစ်ဦးချင်းစီ Mastery အပေါ်6နှင့် 12 မေးခွန်းများကိုအကြား
ကျင့်ဝတ်အပေါ်7မေးခွန်းများကိုအထိ
အားလုံးနည်းပြအလုပ်ကို Mastery လျှောက်ထားကြောင်းယေဘုယျနည်းပြကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် 16 မေးခွန်းများကို
ကျနော်တို့ကြိုးစားနေခြင်းအားဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုစတိုင်နဲ့ content မှကိုယ့်ကိုယ်ကို Orient ရန်သင့်အားအားပေး နမူနာစာမေးပွဲဖြေဆို ပထမဦးဆုံး (အခမဲ့) ။
သင့်ရဲ့တိုးတက်မှု Save: တဲ့အခါမှာသင် tes ယူသငျသညျဆက်လက်ဆောင်ရွက်အဖြစ်သင့်အဖြေများကိုမှတျတမျးတငျထားပါလိမ့်မည်, သင် log လျှင်စနစ်သင့်ရဲ့အဖြေကိုမှတ်မိကြလိမ့်မည်သို့မှသာ t ကိုပုံမှန်ကြားကာလမှာ (Bottom-လက်ဝဲ-ထောင့်တွင် "နောက်ပိုင်း Save and Continue" ခလုတ်ကို) သငျ့တိုးတက်မှုကယ်ဖို့ဆက်လက်သေချာကျေးဇူးပြုပြီး နောက်ပိုင်းရက်စွဲမှာကဖြည့်စွက်ရန်။ ကြင်နာစွာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုချွေတာခြင်းမရှိဘဲ, သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်က "နောက်ကျော" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းမရှိပါ။ သင်တို့သည်လည်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမှတဆင့်တစ်ဝက်တစ်ပျက်ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးနှင့်နောက်ပိုင်းအချိန်တွင်ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်လာမည့်မှပေါ်ရွေ့လျားမတိုင်မီတစ်ဦးချင်းစီမေးခွန်းကိုဖြေရပေမည်။ သငျသညျ "Next" ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြတခါပြန်ယခင်မေးခွန်းကိုမသွားနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
နိုင်ပြီ: စမ်းသပ်မှုများအတွက်ဖြတ်သန်းရမှတ် 70% ၏ (အားလုံးငါးကဏ္ဍများကိုဖြတ်ပြီး) တစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းရာခိုင်နှုန်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါနေစဉ်, ပိတ်ပင် 70% ၏ခြုံငုံရမှတ်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးစီးအပေါ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သင့်ရလဒ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
စမ်းသပ်မှုပြန်လည်ယူရန်: သင့်ရဲ့ခြုံငုံရမှတ် 70% ထက်လျော့နည်းပါကသင့်ရဲ့စမ်းသပ်ဖြည့်တွင်, သင်စမ်းသပ်ပြန်လည်ယူမှအဓိကစာမကျြနှာကိုပြန်ယူပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သင်သည်သင်၏ရလဒ်သုံးသပ်နှင့်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အချိန်ထွက်ယူပြီးပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုပြန်လည်ယူကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်စမ်းသပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ယူခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
sequence: sequence ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းဖြည့်စွက်ပေးပါ။ သငျသညျကိုသာယခင်အပိုင်းပြီးပါကပြီးနောက်လာမည့်အပိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်း၏အဆုံးမှာရမှတ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, သင်လာမည့်အပိုင်းကိုဆက်လက်ရန် option ကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်စာမေးပွဲဖြေဖြည့်စွက်ကူညီပေးဖို့ဆိုမှတ်စုသို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားညွှန်းဆိုသုံးစွဲဖို့ကြိုဆိုကြသည်။
[prev-နောက်ခလုတ်ကို prev-url = "https://certifiedcoach.org/certification-and-development/step1_mp/" လာမယ့်-url = "https://certifiedcoach.org/certification-and-development/get_mpdp/" prev-ခေါင်းစဉ် = "အဆင့် 1: Mastery Practitioner" လာမယ့်-ခေါင်းစဉ် = "MPDP Approved Get"]